အန်နာကွန်ဒါမြွေကီး သင့်ကိုမြိုမယ်ဆိုရင် ဘာတေဖြစ်လာနိုင်မလဲ - 7DAY THADIN
တဈနာရီလောကျကွာတဲ့အခါမှာတော့မွှကွေီးဟာဝတျစုံရဲ့ခေါငျးပိုငျးကနသေူရဲ့ပါးစပျကိုဖွဲပီးစမွိုဖိူ့ကွိုးစားပါတော့တယျ။ဒါပမေယျ့လူတဈကိုယျလုံးကိုမွိုနိုငျဖိူ့ကတော့မအောငျမွငျဘဲကရြှုံးသှားပါတယျ။အကယျ၍သာမွှကေသူကိုမြိုနိုငျသှားခဲ့ရငျတောငျအရှယျရောကျပွီးသားလူတဈယောကျsize ကိုဘယျလိူမြို နိုငျမှာလဲ.
အနျ၏ကှနျဒါတရေဲ့ပါစပျဟာအလှနျကိုကယျြပွီးတော့သူရဲ့ပါးစပျဟနိုငျမှုဟာသငျတဈကိုယျလူံးကိုမြိုနိုငျလောကျတဲ့ထိကိုကယျြပါတယျ။ဒါအပွငျဒီမွှဟောတဈခွားမှတေလေိုအစိတျရှိတဲ့ သတ်တဝါမြိုး လညျးမဟုတျပါဘူး။
တစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မြွေကြီးဟာဝတ်စုံရဲ့ခေါင်းပိုင်းကနေသူရဲ့ပါးစပ်ကိုဖြဲပီးစမြိုဖိူ့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ဒါ​ပေမယ့်လူတစ်ကိုယ်လုံးကိုမြိုနိုင်ဖိူ့ကတော့မအောင်မြင်ဘဲကျရှုံးသွားပါတယ်။အကယ်၍သာမြွေကသူကိုမျိုနိုင်သွားခဲ့ရင်တောင်အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတစ်ယောက်size ကိုဘယ်လိူမျို နိုင်မှာလဲ.
အန်၏ကွန်ဒါတေရဲ့ပါစပ်ဟာအလွန်ကိုကျယ်ပြီးတော့သူရဲ့ပါးစပ်ဟနိုင်မှုဟာသင်တစ်ကိုယ်လူံးက်ိုမျိုနိုင်လောက်တဲ့ထိကိုကျယ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီမြွေဟာတစ်ခြားမွေတေလိုအစိတ်ရှိတဲ့ သတ္တဝါမျိုး လည်းမဟုတ်ပါဘူး။
Previous Article လူနေတိုက်ခန်းကိုဖောက်ပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရထားလမ်းကြီး
Next Article မျှော်လင့်ရင်ခုန်စွာ. . ကုန်းတစ်တန်. . လေတစ်တန် ခရီးနှင်ခဲ့ပြီး. . .အွန်လိုင်းချစ်သူနဲ့ အတွေ့ ငုတ်တုတ်မေ့ တုန်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်